Amathawula / amabhulukwe okugeza → okokuphromotha • i-P & M efekethisiwe yekhompyutha
Amathawula kanye izingubo zokugeza izikhangiso ziyindlela enhle yokukhangisa. Ikhwalithi efanele izindwangu, ama-logo aqinile nenhle angaba umbukiso omuhle wenkampani. Imvamisa etholakala emahhotela, ezikhungweni zokuzilibazisa, kuma-SPA, ezindlini okuqashiswa kuzo nakwezinye izindawo eziningi, nakanjani zikhulisa udumo lwenkampani.
Izindwangu ezisezingeni eliphakeme ezinokumaka zizonelisa izidingo zamakhasimende afunwa kakhulu. Ngasikhathi sinye, bazogqama emncintiswaneni ngokuqina okuthe xaxa futhi banciphise amathuba okuba nomonakalo.
Kumnandi ukuthinta izinto zokwakha
Izinto okwenziwa ngazo amathawula namabhavu okugeza zithambile ukuthintwa futhi zibucayi nasesikhunjeni esizwelayo. Ngenxa yenduduzo abayinikeza abasebenzisi bayo, baba nomthelela omuhle ekuboneni kwenkampani.
Ngaphezu kwalokho, uma uvumela izivakashi ukuthi zithenge ithawula elinjalo ngokumakwa, ithuba lokuthi ikhasimende liphinde livakashele liyakhuphuka ngenxa yokugcinwa kwalo enkumbulweni yomkhiqizo lapho lisebenzisa ithawula noma ezinye izindwangu. Amagajethi anjalo asebenzayo ayaziswa ngaso sonke isikhathi, kanti ngakolunye uhlangothi, akha isikhundla somkhiqizo emakethe.
Kufanele unake amathawula enziwe ngezinto zokoma ngokushesha, okunciphisa ubungozi bomswakama, futhi ngaleyo ndlela - iphunga elibi. Izindwangu esitolo sethu ziguqulelwa ukusetshenziswa njalo nokuwashwa emazingeni okushisa aphezulu.
Umbukiso osebenzayo futhi osebenzayo wenkampani
Ukumakwa okwenziwe ezindlini zasehhotela nasezindlini kubukeka kumangalisa kakhulu, ngaleyo ndlela kuhehe amehlo ezindawo ezizungezile. Leli yithuba eliyingqayizivele kulabo abalindele isithombe esikhangayo. Sinepaki yethu yomshini efakwe amadivayisi aphezulu kuphela.
Njengoba sinawo la mathuba, siyakwazi ukuthola umphumela wokumaka ngokuphelela okukhethekile kuyo yonke imininingwane. Sinikeza izindlela ezahlukahlukene ukumaka, ngaphandle kokunconywa ikakhulukazi imifekethiso yekhompyutha ngezindwangu ezijiyile, senza futhi ukuphrinta kwesikrini ne-sublimation.
Amathawula z imifekethiso futhi kuwumqondo omuhle wesipho. Isipho esinjalo esenzelwe wena, esihle, kodwa futhi esisebenzisekayo sizojabulisa wonke umamukeli. Ihlotshiswe ngephethini yoqobo, ilogo izoshiya inkumbulo emnandi isikhathi eside.
Wonke umuntu usebenzisa amathawula, abalulekile empilweni yansuku zonke, ngakho-ke umuntu owamukelayo uzowasebenzisa nakanjani. Kuyamangaza kakhulu, kungakhathalekile ukuthi isizini noma isenzakalo sini, kungaba yisipho sezihlobo, amaklayenti noma osonkontileka.
Inkampani ngayinye ingasebenzisa futhi amathawula anelebula anje ngemiklomelo emincintiswaneni ezinkundleni zokuxhumana - ingenye yezindlela zokukhangisa ezisebenza kahle kakhulu futhi ezingabizi kakhulu.
amathawula aphrintiwe we-etigroamathawula wezingane aneprintaamathawula enkampani anokuphrintaamathawula we-terry ngephrintaamathawula wehhotela anokuphrintaamathawula wokugeza wezingane aneprintaamathawula okugeza aphrintiweAmathawula okugeza aphrintiwe nomyeni nenkosikaziamathawula okugeza anokuphrinta kwakhoamathawula uma ucelwa ngomshiniamathawula amaphepha aphrintiweamathawula ebhishi aphrintiweamathawula olwandle anokuphrinta kwakhoamathawula wokuphromotha ngephrintaamathawula ezemidlalo aquketheAmathawula we-Microfiber anokuphrintaamathawula aphrintiweamathawula okuphrinta i-allegroamathawula okuphrinta kwedijithaliamathawula anamagama aphrintiweamathawula anokuphrinta kweKrakowamathawula ashicilelwe ngumama nobabaamathawula abhalwe ngomyeni nenkosikaziamathawula okuphrinta iziphoamathawula aphrintiwe emshadweniamathawula ashicilelwe esicelweniamathawula nge-poznań yokuphrintaamathawula anokuphrinta kweRybnikamathawula anokuphrinta kweWarsawamathawula nge Wroclaw ukuphrintaamathawula anokuphrinta kwakhoIzindwangu zokugeza zamadoda ezinokuphrintaama-bathrobes anokuphrintaizindawo zokugeza ezinokuphrinta kweWarsaw